တိရိစ္ဆာန်သတ်မှတ်ခြင်း, LF / HF Reader ကို 134.2KHz Animal ID Tag Reader, 134.2KHz Animal ID Tag Scanner, Handheld Bluetooth Long Distance Animal Ear Tag Reader, Handheld Long Distance Animal Ear Tag Reader, Handheld Long Distance Animal Ear Tag Scanner, လက်ကိုင် Long ကအဝေးသင်တိရိစ္ဆာန် ID ကို Tag ကို Reader ကို, ISO11784/ISO11785 FDX-B Protocol Animal Ear Tag Reader, ISO11784/ISO11785 FDX-B Protocol Animal ID Tag Reader, Portable Bluetooth Long Distance Animal ID Tag Reader, Portable Long Distance Animal ID Tag Reader
125KHz models can be customized for AIDC, data acquisition, ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲခြင်း, ဝင်ခွင့်လက်မှတ်, access control and time attendance.
အလုပ်အကြိမ်ရေ: လေး 134.2K, 125kHz စိတ်ကြိုက်
ပံ့ပိုးမှုသဘောတူညီချက်: ISO11784 / ISO11785, FDX-B က
ထောက်ပံ့ရေးဗို့: 3.7V ကိုလိုသလိုဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့လီသီယမ်ဘက်ထရီ
Tag ကိုစာဖတ်ခြင်းအကွာအဝေး: ပိုများသော 20cm ထက် (30မီလီမီတာနားကို tag ကို)
storage space: အထိ 60000 မှတ်တမ်းများ
ပံ့ပိုးမှုဘာသာစကား: Chinese သို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်
ပြသ: 128× 64 LED
အရွယ်: 175× 77 × 35mm
DH-134 model Handheld long distance animal ID Tag Reader specialized in animal identification, built-in 3.7V rechargeable lithium batteries, lithium batteries can directly charging is convenient to use. Machine small volume and facilitating moving, ရှည်လျားသောအကွာအဝေးကိုဖတ်, high sensitivity. Built-in Bluetooth module to facilitate data communication. Can choose Chinese or English.
ဝက်, cattle, sheep and other livestock management
I am interested in your product Handheld Long Distance Animal ID Tag Reader, 134.2kHz, ISO11784 / 11785, FDX-B က
prev: တန်ဖိုးနည်းသောလိုက်ဖက်တဲ့ EM4305 Wafer ကိုပေးသည်, တန်ဖိုးနည်းသောလိုက်ဖက်တဲ့ EM4305 Chip, EM4305 Wafer ကိုချည်နှောင်ပါ
တန်ဖိုးနည်းသောလိုက်ဖက်တဲ့ EM4305 Wafer ကိုပေးသည်, တန်ဖိုးနည်းသောလိုက်ဖက်တဲ့ EM4305 Chip, EM4305 Wafer ကိုချည်နှောင်ပါ
Multi-protocol Handheld Reader for Livestock, Pets and Asset Identification, Support ISO11784/11785, ISO14223, FDX-B က, FDX-တစ်ဦးက, HDX, EM4102
RFID လူသားထည့်သွင်းထားသော Bio-glass Tube Tube Tag, NFC လူသားထည့်သွင်းထားသော Bio-glass Tube Tube Tag